Khurak Online | बजेट आयो, जनशक्ति छैन - Khurak Online बजेट आयो, जनशक्ति छैन - Khurak Online
प्रदेश ५ सफलता
बुटवल — ३३ वर्षअघि स्थापना भएको अर्घाखाँची जिल्ला अस्पताल टिनको छानामुनि छ । दैनिक दुई सय बिरामी आउँछन् । सरकारी स्तरबाट ६ मेडिकल अधिकृत र चार नर्स कार्यरत अस्पतालमा भर्नाका लागि १५ बेड छन् ।
अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० बेडको बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको दुई वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अस्पताललाई सोमबार संघीय स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने गरी २ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो ।
अस्पतालका निमित्त डा. कपिल गौतमले २ करोड प्राप्त हुने जानकारी आएको भए पनि त्यसले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नभएको बताए । तत्काल कोरोना संक्रमितको उपचारमा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । जनशक्ति र पूर्वाधारको ठूलो समस्या छ । ‘हामीले पहिला स्तरोन्नतिका लागि निर्णय हुनुपर्‍यो भनेर प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो निर्णयबिना अरू काम अघि बढ्नै सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले मंगलबार पनि प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग कुरा गरेकाले ५० बेडको स्तरोन्नतिका लागि एक सातामा टुंगो लाग्ने आश्वासन पाएको बताए ।
संघीय सरकारले प्रदेशका अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताललाई प्रतिअस्पताल दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कपिलवस्तु प्रदेश ५ मा कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला हो । त्यहाँ अहिले पनि २ सय २९ जनाको उपचार भइरहेको छ । १ हजार ६९ जना संक्रमित भएका थिए । लक्षण भएका १ सय ३७ जना छन् ।
कपिलवस्तुमा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । १५ बेडको अस्पतालमा ३१ जनाको दरबन्दी भए पनि ६ जना मेडिकल अधिकृतको भरमा चल्दै आएको छ । स्थायी एक जना मात्र छन् । अन्य सबै करारका हुन् । सरकारले खर्च गर्न बजेट दिए पनि करारका कर्मचारीलाई अख्तियारी दिन मिल्दैन । त्यसले बजेट आए पनि व्यवस्थापन र बिरामीको उपचार गर्न सक्ने गरी खर्च गर्न असम्भव रहेको अस्पतालका निमित्त मेसु डा. किशोर बन्जाडेले बताए ।
संघीय मन्त्रालयले प्रदेश ५ का यी दुई अस्पताललाई चार भेन्टिलेटरसहित १० बेडका आईसीयू सञ्चालन गर्ने गरी क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो । तर, दुवै अस्पतालमा पूर्वाधारदेखि अति आवश्यक जनशक्ति शून्य छ । कन्सल्टेन्ट, फिजिसियन र एनेस्थेसिया डाक्टर नै छैनन् ।